sida bushimaha xaaska loo dhuuqo galmada cusub? | shumis.net
Home » galmada » sida bushimaha xaaska loo dhuuqo galmada cusub?
sida bushimaha xaaska loo dhuuqo galmada cusub?
Waxaan ka hadlaynaa xubin muhim ah xagga istiinka dumarka m hubaal waxaa ah Hadalka naxariista iyo sheekada ham hamta (Sheekada Macaan) in ay tahay talaabada ugu horeeysa ee Weerarka sariirta, waxaana la tilmaamay xitaa xaaska mudda dheer la qabo marka sheekada macaan ee xod-xodashada maqasho in ay jiriricooto kadibna si tartiib tartiib ah aad ugu biloowdo Dhuuqmada dhanka Bishimaha faruuryaha gabdha.
Dhuuqmada waxaa ugu macaan in labada raaxeysanaya midba mid kale hal bishin ka dhuuqo tusaale in ninka dhuuqo bishinta hoose ee haweeneyda halka iyaduna ay isagu ku dheehantahay oo ay u dhuuqeyso midda sareeysa.
Title: sida bushimaha xaaska loo dhuuqo galmada cusub?